उच्च ऊंचाई बिक्री के लिए एन सी घर - आश्चर्यजनक सेटिंग | विशेष खोजहरू
उच्च ऊंचाई बिक्री के लिए एन सी घर - आश्चर्यजनक सेटिंग
घर » सूचीकरण » उच्च ऊंचाई बिक्री के लिए एन सी घर - आश्चर्यजनक सेटिंग
बेल्ले ग्लेड - एक चौंकाने उच्च उच्च एनसीडी गृह
उत्तर, दक्षिण, पूर्वी वा पश्चिम हेर्नुहोस्, तपाईंको खिचिएको एउटा विन्डो त्यहाँ छ। लगभग 4850 फुट उचाईमा, हावा ठुलो र कुरकुरा छ। प्रत्येक दिन एक पहाडको चोटहरू तल एक नयाँ दृश्य, पूर्वी सूर्य, पश्चिमी सूर्यास्त र मुलायम बादलहरू फैलिएको छ।
स्प्रिंगको माध्यमबाट पाल्पाले उत्कृष्ट रंगहरूमा बगैंचाहरू विस्फोटको रूपमा प्रकट भएको छ। धेरै वर्षसम्म बसचा गार्डनका मालिक, प्रसिद्ध परिदृश्य वास्तुकारले 1500 फिटको पत्थर पर्खालहरु, बेंच र मार्ग को हाइड्रेंजस को 15 किस्महरु, म्यापल पेडहरु को 29 किस्मों, 30,000 डेलीलिली, पहेंलो घंटी, हाइड्रेंजस, र हरेक अन्य अनुमानित क्षणिक।
समकालीन समयमा डिजाइन, लुम्बिनी विचारहरू ग्रेट स्काइको पहाडहरू टेनेसी को सबै तरिका लगभग हरेक कोठा को फोकल बिन्दु हो। धेरै कोठाहरूमा पोर्च र डेक खुला भावना बढाउँछ।
केहि सुविधाहरु मा ग्रेनाइट Countertops संग एक विशाल अद्यतन रसोईघर र सुंदर काठ कैबिनेट शामिल छ। भान्साले लिङ्ग कोठामा ठूलो काठको जल बगे स्टोवको साथ खुला छ। उड्ने चिसो झरनाको साथ एक ढुङ्गा सुनिएको छ। यहाँ एक मुख्य स्तरको मास्टर बेडरूम हो जुन जेटेड टब संग विशाल इन्सुइट बाथ र कोरिन्थियन संगमरमर, सुन्दर सबै-काठ अलमारियाँ, र लक्जरी लावा पोत सिंक को एक अलग बौछार। अधिकांश कोठा मा, मास्टर बेडरूम र स्नान देखि दृश्य जबरदस्त छ।
घरभित्र धेरै प्रवेशहरू छन्। एक सुन्दर आंगनले भू-स्तरमा एक पहुँच प्रदान गर्दछ जुन विनियमन आकार बिलियर्ड्स तालिकाको साथमा ठूलो गेम रूम समावेश गरिएको छ जुन पहिले नै पौराणिक मिनेसोटा फ्याटले प्रयोग गरेको थियो। अर्को ठूलो कोठा, अर्को ठूलो, काठ जलने वाला बक स्टोव र दुई विशाल अतिथि बेडरूम संग निचला डेक बाहिर निस्कन्छ।
$ 562,400 को कर आकलनको राम्रोसँग राम्रो मूल्य!
तपाईं 3.32 सुन्दर एकेडमा एसिहेभिल्ले, नेकपाबाट सिर्फ 35 मिनेटमा यो आश्चर्यजनक, गेट, उच्च उडान एनसी घर फेला पार्नुहुनेछ।
के तपाईं बेचन गर्न एक अनोखी सम्पत्ति छ?
मूल्य: $ 514,500
ठेगाना: 947 Windswept Ridge Rd
जिप कोड: 28716
निर्माण गरिएको वर्ष: 1985
वर्ग फिट: 4270
वित्तीय: तल कर मूल्याङ्कन गरिएको मूल्य। 2017 को कर मूल्याङ्कन $ 562,400 हो।
अघिल्लो सूचीबिक्रीको लागि हाउसबाउट - बेइजिङअर्को सूचीएक आकर्षक पार्क कलेज मा WNC ऐतिहासिक विलासिता गृह
एक आकर्षक पार्क कलेज मा WNC ऐतिहासिक विलासिता गृह